Nandray anjara tamin'ny Alibaba Core Merchant Training Camp izahay tamin'ny herinandro lasa
Amso Solar dia ekipa tanora, ary ny tanora ankehitriny dia tsy vitan'ny hoe mila karama fotsiny fa tontolo iainana ahafahan'izy ireo mivoatra. Amso Solar dia orinasa mifantoka amin'ny fanofanana ny mpiasa hatrany ary vonona izahay hanampy ny mpiasa tsirairay hahavita fampandrosoana. Mino izahay fa ny orinasa ...
Ny sela voajanahary dia nametraka firaketana vaovao, miaraka amin'ny fahombiazan'ny fiovam-po 18,07%
Ny haitao farany OPV (Organic Solar Cell) namboarina niaraka noforonin'ny ekipan'Andriamatoa Liu Feng avy amin'ny Oniversite Shanghai Jiaotong sy ny University of Aeronautics and Astronautics any Beijing dia nohavaozina ho 18,2% ary ny fahombiazan'ny fiovam-po ho 18,07%, mametraka firaketana vaovao. ...
Teknolojia vaovao amin'ny fotodrafitrasa fotovoltaika-sela mangarahara
Ny sela mangarahara dia tsy foto-kevitra vaovao, fa noho ny olana ara-materialin'ny sosona semiconductor dia sarotra ny nandika azy io ho fampiharana. Na izany aza, vao tsy ela akory izay, ny mpahay siansa ao amin'ny Oniversite Nasionalin'i Incheon any Korea Atsimo dia namorona solosaina mahomby sy mangarahara ...
Ao amin'ny tsena farany teo, henonao ny olona miresaka momba ny sela masoandro 5BB, 9BB, M6 karazana 166mm masoandro ary ny tontolon'ny masoandro tapaka. Mety hafangaro amin'ireo teny rehetra ireo ianao, inona izany? Inona no ijoroan'izy ireo? Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'izy ireo? Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava fohifohy ny hevitra rehetra voalaza ...
inona avy ireo singa ao amin'ny panneaux solaires
Voalohany indrindra, andeha hojerentsika ny kisarisary amin'ireo panneaux solaires. Ny sosona afovoany dia ny sela solar, izy ireo no lakilen'ny singa sy fototra ao amin'ny tontolon'ny masoandro. Betsaka ny karazana sela solar, raha miresaka amin'ny fahitana ny habeny isika dia hahita haben'ny masoandro lehibe telo ...
Zava-nisongadina tamin'ny SNEC 2020
Ny SNEC faha-14 dia natao tamin'ny 8-10 aogositra 2020 tao Shanghai. Na dia tara noho ny areti-mandringana aza ny olona, ​​dia mbola naneho ny fitiavany mafy ilay hetsika ihany koa ny indostrian'ny masoandro. Raha jerena topimaso dia nahita teknika vaovao lehibe namboarina tamin'ny tontolon'ny masoandro izahay izay mifantoka amin'ny wafer kristaly lehibe habe, avo lenta, ...
Adiresy: Rm 1603, 99 Zhongshan Rd, Nanjing, Sina